China MS Electrical High Pressure multistage rano madio centrifugal pump factory sy mpanamboatra | Tongke
Paompy centrifugal rano madio multistage MS Pressure avo lenta
Ny paompy miady amin'ny zoro XBC-VTP dia lava misy andiana dingana tokana, paompy diffusers multistage, vitaina mifanaraka amin'ny National Standard GB6245-2006 farany. Nanatsara ny endriny ihany koa izahay tamin'ny alàlan'ny fanondroana ny fenitry ny Fikambanana Amerikanina Miaro ny Afo any Etazonia. Ampiasaina indrindra amin'ny famatsian-drano amin'ny alàlan'ny petrochemical, gazy voajanahary, zavamaniry herinaratra, lamba landihazo, wharf, fiaramanidina, fanodinana entana, trano miakatra avo sy indostria hafa. Izy io koa dia azo ampiharina amin'ny sambo, tanky an-dranomasina, sambo mpamono afo ary ireo fotoana famatsiana hafa.
Single dingana farany suction centrifugal karazana NFPA FM fi ...
API610 ANSI Petrochemical Standard ...
MS Electrical High Pressure multistage rano madio c ...
Horizontal Split casing centrifugal water destin ...
Fiara vonjy taitra finday Diesel maotera Drive maina Se ...
Ny paompy rano karazana MS dia ampiasaina hitaterana ny rano madio sy ny ranoka tsy misy ateraky ny rano an-davaka miaraka amin'ny voamaina mafy 1,5%. Granularity <0.5mm. Ny mari-pana ao anaty ranon-javatra dia tsy mihoatra ny 80º C. Ny mari-pana ao anaty ranon-javatra dia tsy mihoatra ny 80º C. Ny paompy dia mety amin'ny famatsian-drano sy ny lakan-drano any amin'ireo toeram-pitrandrahana, ozinina ary tanàna.
Fanamarihana: Rehefa any amin'ny toeram-pitrandrahana arintany ny zava-misy dia hampiasaina ny motera karazana porofo.
MS: Paompim-pitrandrahana empira azo ampiasaina
280: Ny sandan'ny fahaiza-manao amin'ny teboka namboarina (m3 / h)
43: Sanda tokana ambaratonga tokana amin'ny teboka voatondro an'ny paompy (m)
(A): Ny endrika faharoa
3: Nomera sehatra paompy
Tombony amin'ny pump type MS
1. Fametrahana mora sy afindra;
2. Ny fanohanan'ny vatanao amin'ny vatofantsika dia manome toky ny firafitra azo antoka sy ny fanoherana afovoany afovoany sy ny fanodikodinana ateraky ny enta-mavesatra;
3. Tsy misy famolavolana be loatra, alaivo antoka fa hiasa mafy ny fampisehoana;
4. Mampiasà modely hydraulic standard ho an'ny firenena mba hahomby amin'ny fahombiazan'ny asa sy ny fahombiazan'ny fanoherana rongony;
5. Misy fametahana tombo-kase sy tombo-kase mekanika.
6. Mampiasà fitaovana samihafa amin'ny alàlan'ny mpanelanelana samihafa.
7. Sakany apetraka amin'ny fampiharana
Mety ho an'ny toeram-pitrandrahana, ny famatsian-drano any an-tanàna ary ny injenieran'ny rano maloto
Alefaso ny mpanelanelana misy rano, tsy misy sombina matanjaka, mari-pana ambanin'ny 80 ° C
Mety amin'ny famahanana rano mangotraka na manatitra antonony mitovy amin'ny rano mafana, tsy misy sombin-javatra matevina, mari-pana ambanin'ny 105 ° C Mety tsara amin'ny vy stain, fitrandrahana, fizarana famindrana maloto.
Alefaso ny rano fitrandrahana misy atiny potika mafy eo ambanin'ny 1,5% na rano maloto mitovy amin'izany, ny mari-pana ambanin'ny 80 ° C
Mety amin'ny famindrana ranon-tsolika tsy misy azo ampiharina matanjaka, mari-pana eo anelanelan'ny -20 ° C ~ 105 ° C
Mety amin'ny famindrana vokatra solika sy solika raha tsy misy azo ampiharina, mari-pana eo anelanelan'ny -20 ° C ~ 150 ° C, viscosity ambanin'ny 120cSt
Maninona no mifidy PUMPS TKFLO
♦ Mifantoha amin'ny fangatahana sy serivisy Customs
Manome serivisy premium izahay hihaonana amin'ny fangatahan'ny mpanjifa, ny fahafaham-po ny mpanjifa dia singa iray lehibe handrefesana ny kalitaon'ny vokatra. Mahomby amin'ny angovo, fiasa miorina ary serivisy teknika Mandrakizay.
♦ Ekipa injeniera teknika avo lenta
Mitazona matihanina iraisam-pianarana sy traikefa azo tsapain-tànana amin'ny ekipa teknika, ao anatin'izany ny mpampianatra dokotera roa, profesora iray, injeniera zokiny 5 ary injeniera mihoatra ny 20 ho an'ny fanatsarana sy fanavaozana lozisialy maharitra ary hanomezana anao fanohanana ara-teknika feno sy tsara aorian'ny- serivisy fivarotana.
♦ Mpamatsy faritra avo lenta
Mpamatsy kalitao ho an'ny casting avo lenta; Ireo singa mekanika marika iraisam-pirenena sy an-trano malaza, mitondra, motera, tontonana fanaraha-maso ary motera diesel hihaona amin'ny filan'ny mpanjifanay isan-karazany. Niara-niasa tamin'ny WEG / ABB / SIMENS / CUMMININS / VOLVO / PERKIN ...
♦ Rafitra fanaraha-maso hentitra
Manaraka tanteraka ny rafitra ISO9001: 2015 ny mpanamboatra ary ny rafitra fitantanana 6S. Azonao antoka fa mifanaraka amin'ny tolotra kalitao ilaina ny vokatray. Tatitra ara-materialy, tatitra momba ny fanandramana fampisehoana ... ary fanaraha-maso avy amin'ny antoko fahatelo no misy.
♦ Serivisy mialoha ny varotra
- Fanohanana ny fanadihadiana sy ny consulting. 15 taona traikefa paompy.- Teknolojika injeniera mpivarotra iray.- Hot-line of service is available in 24h, namaly in 8h.
♦ Aorian'ny fanompoana
- Fanombanana fitaovana fanofanana teknika; - Fametrahana sy fanesorana ny troubleshoot; - Fanavaozana sy fanatsarana ny fikojakojana; - Fiantohana mandritra ny herintaona. Omeo fanampiana ara-teknika maimaim-poana amin'ny fiainana ny vokatra. - Ataovy izay hifandraisana amin'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainana rehetra, mahazoa valiny amin'ny fampiasana ireo fitaovana ary ataovy tonga lafatra hatrany ny kalitaon'ny vokatra.
Previous: ANS (V) Series Double Suction Split Casing Centrifugal Pump
Manaraka: API610 ANSI Process Chemical Standard Petrochemical Heavy Crude Fuel Pump Pump
savaivony DN 80-250 mm
fahafahana 25-500 m3 / h
Suhu amin'ny ranoka hatramin'ny 80 ºC
1.Compact fironana fisehoana tsara, fitoniana tsara ary fametrahana mora.
2.Ny fihazakazahana ny impeller avo roa heny nofinofy dia nahatonga ny herin'ny axial hihena farafahakeliny ary manana fomban'ny fomba fiasa tena tsara hydraulic, na ny atin'ny paompy sy ny eo ambonin'ilay impeller, izay natsipy marina, dia tena malama sy manana fanoherana mivaingana fampisehoana mivaingana ary mahomby be.
3. Ny paompy dia volavola indroa miorina, izay mampihena be ny hery radial, manamaivana ny enta-mavesatra ary ny fiainam-pitaterana maharitra.
4.Bearing dia mampiasa bearings SKF sy NSK hiantohana ny fihazakazahana, tabataba ambany ary faharetana lava.
5.Shaft tombo-kase mampiasa BURGMANN mekanika na fametahana tombo-kase mba hiantohana ny 8000h tsy mandeha mitete.
6. Fomban'ny flange: fenitra GB, HG, DIN, ANSI, arakaraka ny zavatra takinao.
Fanamboarana fitaovana ilaina
Fanamboarana fitaovana ilaina (Ho an'ny referansa fotsiny)
zavatra Rano madio Misotroa rano Rano maloto Rano mafana Rano ranomasina
Case & Cover Cast vy HT250 SS304 Sintile vy QT500 Vy vy Duplex SS 2205 / Bronze / SS316L
Impeller Cast vy HT250 SS304 Sintile vy QT500 2Cr13 Duplex SS 2205 / Bronze / SS316L
Peratra mitafy Cast vy HT250 SS304 Sintile vy QT500 2Cr13 Duplex SS 2205 / Bronze / SS316L
Hazo SS420 SS420 40Cr 40Cr Duplex SS 2205
Kitapo lava Carbon vy / SS SS304 SS304 SS304 Duplex SS 2205 / Bronze / SS316L
Fanamarihana: Ny lisitra ara-nofo amin'ny antsipiriany dia mifanaraka amin'ny toetran'ny rano sy ny tranokala
NAOTY alohan'ny filaminana
Famaritana ilaina apetraka amin'ny filaminana.
1. Modely paompy sy ny fikorianany, lohany (ao anatin'izany ny fatiantoka ny rafitra), NPSHr amin'ny faran'ny toe-piainana tadiavina.
2. Karazan-tombo-kase (tsy maintsy marihina na tombo-kase mekanika na fonosana ary raha tsy izany dia hatao ny fandefasana ny rafitra tombo-kase mekanika).
3. Ny lalana mankany amin'ny paompy (tsy maintsy marihina raha toa ka misy fametrahana CCW ary raha tsy izany dia hatao ny fandefasana fametahana famantaranandro).
4. Parameter an'ny motera (motera Y series an'ny IP44 amin'ny ankapobeny dia ampiasaina ho motera malefaka ambany miaraka amina herinaratra <200KW ary, rehefa hampiasa herinaratra avo iray dia mba diniho azafady ny herinaratra, ny isa fiarovana, ny insulation class, ny fomba fampangatsiahana , hery, isan'ny polarity sy mpanamboatra).
5. ny fitaovan'ny casing pump, impeller, shaft sns. (ny fandefasana miaraka amin'ny fizarana mahazatra dia hatao raha tsy marihina).
6. mari-pana antonony (fanaterana amin'ny mpanelanelana amin'ny mari-pana tsy miovaova dia hatao raha tsy marihina).
7. Rehefa manaratsy na misy voamadinika mafy ny medium hoentina, dia mariho tsara ny fiasa momba azy.
Q1. Mpanamboatra ve ianao?
Eny, tao amin'ny indostrian'ny paompy sy indostrian'ny marketing ivelany izahay nandritra ny 15 taona.
Q2. Tsena inona no anaovan'ny paompinao?
Firenena sy faritra 20 mahery, toa an'i Azia atsimo atsinanana, Eropa, Amerika avaratra sy atsimo, Afrika, ranomasimbe, firenena Afovoany Atsinanana…
Q3. Inona no fampahalalana tokony hampahafantariko anao raha te-hahazo teny nindramina aho?
Azafady mba ampahafantaro anay ny fahafahan'ny paompy, ny lohany, ny salantsalany, ny toe-draharaha, ny habetsaky ny sisa, sns.
Q4. Azo atao ve ny manonta ny marika misy antsika amin'ny paompy?
Ekena tanteraka ho fitsipika iraisam-pirenena. Q5. Ahoana no hahazoako ny vidin'ny paompinao? Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ireto fampahalalana manaraka ireto. Ny olona manompo anay manokana dia hamaly anao ao anatin'ny 24 ora.
Famatsiana rano velona amin'ny trano avo, rafitra miady amin'ny afo, rano manondraka mandeha ho azy ao ambanin'ny lambam-baravarankely, fitaterana rano lavitra, fivezivezena amin'ny fizotry ny famokarana, manohana ny fampiasana ny karazan-java-drehetra sy ny rano fanodinana isan-karazany sns
Famatsian-drano sy rano ho an'ny toeram-pitrandrahana
Hotely, trano fisakafoanana, vata fampangatsiahana fialamboly ary rano famatsian-drano
Rafitra fampiroboroboana; Rano famelomana boiler ary condensate; Fanafanana sy fanamafisam-peo
Irrigation; Circulation; Industry; Fire - rafitra ady; Orinasa matanjaka.
Ampahany amin'ny tetikasa santionany
200MS karazana paompy ampiasana ho an'ny mpangataka harena ankibon'ny tany
Mifandraisa amin'ny antsipirianyShanghai Tongke Flow Technology Co., LTD
Olona mifandray: Andriamatoa Seth Chan
GDL tsy miankina irery mitsangana mitsangana maro Centr ...
LDP Series Single-Stage End-Suction Mitsivalana ...
GDLF Stainless Steel Mitsangana Multi-Stage Avo ...